Ukhetho Endalwenza Ndisemncinane—Ukunceda Abantu BaseKhambodiya | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
Ndandineminyaka nje elishumi xa kwafika abantwana baseKhambodiya esikolweni sam eColumbus, eOhio, eUnited States, ngo-1985. Omnye waloo makhwenkwe wayesazi amagama ambalwa esiNgesi. Esebenzisa imizobo, wandibalisela amabali amanyumnyezi okuthuthunjiswa, okubulawa, nokusaba. Ebusuku ndandidla ngokulila xa ndicinga ngaba bantwana. Ndandifuna ukubaxelela ngethemba leParadesi kwakunye nethemba lovuko, kodwa babengalwazi ulwimi lwam. Nakuba ndandiseyinkwenkwana ndagqiba kwelokuba ndifunde isiKhambodiya ukuze ndikwazi ukufundisa abantwana endandifunda nabo ngoYehova. Ngelo xesha ndandingayiqondi indlela eso sigqibo esasiya kulichaphazela ngalo ikamva lam.
Kwakunzima ukufunda isiKhambodiya. Ndanikezela kwade kwakabini, kodwa esebenzisa abazali bam, uYehova wandomeleza. Ekuhambeni kwexesha, ootitshala nabantwana endandifunda nabo bandibongoza ukuba ndifune umsebenzi ohlawulayo. Kodwa ekubeni ndandifuna ukuba nguvulindlela, ndakhetha izifundo ezaziza kundinceda ndifumane umsebenzi wesingxungxo, ukuze ndikwazi ukufikelela usukelo lwam. Ukuphuma kwam esikolweni, ndandidla ngokusebenza nabanye oovulindlela entsimini. Ukanti ndandikwafundisa abanye abafundi ababefuna ukufunda isiNgesi njengolwimi lwesibini. Olu lukhetho lwandinceda nyhani kamva.
Xa ndandineminyaka eyi-16 ndeva ngeqela laseKhambodiya elaliseLong Beach, eKhalifoniya, eUnited States. Ndatyelela apho ndaza ndafunda ukufunda isiKhambodiya. Ukugqiba kwam esikolweni, ndaba nguvulindlela ndaza ndaqhubeka ndishumayela kubantu baseKhambodiya ababehlala kufuphi nasekhaya. Xa ndandineminyaka eyi-18, ndandicinga ngokufudukela eKhambodiya. Yayisenobungozi, kodwa ndandisazi ukuba kubantu abazizigidi ezilishumi abahlala eKhambodiya babembalwa abazivileyo iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Ngelo xesha kwakukho nje ibandla elinye elinabavakalisi abayi-13 kwilizwe lonke. Ndaqala ukutyelela eKhambodiya xa ndandineminyaka eyi-19. Kwiminyaka emibini kamva ndagqiba kwelokuba ndifudukele apho. Ndafumana umsebenzi wesingxungxo wokuguqulela nokufundisa isiNgesi ukuze ndizixhase. Ekuhambeni kwexesha, ndafumana umfazi owayenosukelo olufana nolwam. Siye sanandipha ukunceda abantu balapha bazahlulele kuThixo.
UYehova undinike ‘izicelo zentliziyo yam.’ (INdu. 37:4) Umsebenzi wokwenza abafundi ngowona msebenzi wanelisayo. Kule minyaka iyi-16 ndiseKhambodiya, ela bandla lalinabavakalisi abayi-13 liye lakhula langamabandla ayi-12 namaqela amane!—Kubalisa uJason Blackwell.